IGrolloo kwindlu engaphambili kwi-Amerweg
Grolloo, Drenthe, Netherlands
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguYvonne
Indlu yangaphambili isandula ukulungiswa kwaye yenziwe yafaneleka ukurenta ukuzonwabisa. Indlu inomnyango wayo wangaphambili nongasemva oneterrace kunye negadi ngasemva. (zifike)
Kwindlu ungasebenzisa ikhitshi lakho, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala. Iibhayisekile zakho zingaba zigcinwe kwishedi yethu.
Ukwazi ukuya elwandleIsetyenziswa nangabanye
Indawo yokupaka simahla eseyadini – inendawo eyi-1
I-HDTV ene-I-Netflix, intambo yepremiyamu
Yeyabucala iyadi engasemva – Ibiyelwe yonke
4.82 ·Izimvo eziyi-73
4.82 out of 5 stars from 73 reviews
4.82 · Izimvo eziyi-73
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi73
IGrolloo yilali encinci embindini weDrenthe. Kwilali kukho ii-cafe ezi-2 / iindawo zokutyela apho ungatya kakuhle okanye ukonwabele kwi-terrace ehlotyeni. Ukongeza, iGrolloo inevenkile encinci evula ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukusuka nge-9am ukuya ku-5.30pm. Kwivenkile enkulu (i-Nice Easy Grolloo) unokhetho lokuqesha iibhayisekile. (Bhukisha kwangethuba kwixesha eliphakamileyo) Ukuzonwabisa unako, ngaphezu kokuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile kwindawo enemithi, ukwakhetha ukuya kuqubha eLoomeer, eMoere, eHemelriekje okanye e-Iberenplas.
zonke zikwihlathi elingqonge iGrolloo. Kumda welali kukho ipaki yamava eJoytime, apho unokwenza khona ukudubula, ukhwele epakini enyukayo okanye uzonwabele emanzini okanye kwi-terrace.
EGrolloo yiCuby kunye nemyuziyam yeBizzards kwaye ikwindlu yangaphambili apho uHarry Muskee wayehlala khona. Umxholo ojikeleze i-cuby kunye / okanye i-blues iyatshintsha minyaka le. Ukongeza, iindwendwe zihlala zityelela i-museundorp Orvelte, i-Hunnebedcentrum Borger, imyuziyam i-Ellert kunye ne-Brammert Schoonoord, i-Memorial Camp Westerbork kunye ne-Boomkroonpad, zonke zingaphakathi kwe-radius ye-15 km.
Umbuki zindwendwe ngu- Yvonne
Ujoyine nge- 2018 Novemba
Sihlala kwindawo ephakathi kwaye sinokufikelelwa ekhaya ngokukhalisa intsimbi okanye ngefowuni ephathwayo. I-app ye-airbnb ingqineke iyeyona isebenzayo ukuza kuthi ga ngoku ngenxa yezaziso esizifumana kwifowuni yethu. Singaphendula nanini na. Naxa singekho ixeshana.
Sihlala kwindawo ephakathi kwaye sinokufikelelwa ekhaya ngokukhalisa intsimbi okanye ngefowuni ephathwayo. I-app ye-airbnb ingqineke iyeyona isebenzayo ukuza kuthi ga ngoku ngenxa…
Iilwimi: Nederlands, English, Deutsch
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 15:00 - 23:00